IBSA IJJANNOO JARMAYA ABO JIJJIIRAM AFRIKAA KIBBAA KAN YEROO AMMAA:KALLACHA WALLABUMAA OROMIYAA [KWO]JEDHAMUUN BEEKAMU. -
IBSA IJJANNOO JARMAYA ABO JIJJIIRAM AFRIKAA KIBBAA KAN YEROO AMMAA:KALLACHA WALLABUMAA OROMIYAA [KWO]JEDHAMUUN BEEKAMU.
bilisummaa August 10, 2015	Leave a comment
Hoogantoota;miseenssota deegartoota akkasumass ummata oromoo kan ummatt oromof hawwii billisumaa qaban hundaaf.
Ibsa ijjannoo koree dandmachiituu dhaaba [ABO] jijjiiramaa AFRIKAA KIBBAA jedhamuun ibsii bayee ibsa dhugaa iraa fagaatee taa’uu ibsinaa.
ABOn jijjiiramaa B/G/ Kamaal galchuutiin hogganmu yomilee jaallan qaqqaalin lubbuu isaanii dhabanf kan dua;rra hafaniin baqattummaa geegessaa kan jiran hundaaf hawwiin inii qaabuu yoomilee ciminaan hojjannee salphinaa ayyaan lalatuun ollola dhaabaf miseenssotaf ; deegartoota akkasumass ummata oromoo irratti diigaan godhamuu aman bodaa bakaa hiqabuu .
Ayaan lalatuun maqaa fi alaabaa maqaa dhayudhan ummata oromo kesaa tau,dhan ummata oromo gurgurachuuf sagantaa tokkumaa jedhamun ummata kenaa wan inii qabaatuu dhorgaa jirtii.
Waan kana ta’eef nuti hogganootni qondaalotni akkasumas miseensotiin dhaaba kanaa kan afrikaa kibbaa adda durummaan gocha kana kan oboo yaadesssaa diinnaa tin maxfamee kan balaaleffanu ta;uu namoonii inii maqaa issani koree damdamachiiftuu jedhee mogaasee sun wan hijiiree miseensota keennaa qaqqaalii maqaa isan bareesun kijiibaa yokaan ollola dharr akka dhabaan kabajjaa oromumatiin isin gafaana .
Namootaa inii maqaa koree damdamachiiftuu jedhee mogasee saniiraa
2.j/ abdii kaawoo
5.j/fessal abdul qaadir
Namoon kun yomilee miseenssotaa kallacha wallabumaa oromiyaa ta’uu isann waraa kayoo issan iraa dubaatii hinjnee fedhii jechaa waraa kayoo umataa duraa hindhabanee ta’uu nuu mrikaneesan
Yoomiyyuu kallacha wallabumaa oromiyaa [KWOn] kallcha qabsoo ummata oromooti!
Koree dhaaba kallacha wallabumaa oromiyaa afrikaa kibbaa.
Previous “Oromoon bu’aa aangoo xixqqootiif adda faca’uu hin qaban”
Next ADAM HARUN @ OSFNA 2015 CLOSING NIGHT “Michuu baayyee”